» के तपाई दैनिक रुपमा लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान हुनसक्छ क्यान्सर !
के तपाई दैनिक रुपमा लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान हुनसक्छ क्यान्सर !
१९ माघ २०७६, आईतवार १९:१४
महिलाका लागि सुन्दरी हुनु एक गुण नै हो । बिहाना उठे पछि महिलाहरु आफ्नो श्रृंगारपटारमा नै समय लगाउँछन् । महिलाहरुका लागि श्रृंगारपटार अनिवार्य जस्तै छ । बिशेष गरि आफ्नो सौन्दर्यलाई लिएर बढि चनाखो हुँने कारणले उनीहरु श्रृंगारपटारमा ध्यान दिन्छन ।